Ny lalao enina ivelan'ny Internet tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Afaka manao izany isika izao misafidiana lalao marobe azo alaina amin'ny findainao Android. Na izany aza, mitaky ampahany lehibe amin'ireo lalao ireo Fifandraisana amin'ny Internet. Zavatra iray amin'ny fitsipika fa tsy olana. Afa-tsy rehefa eo amin'ny tranonkala tsy misy fifandraisana Internet isika. Ohatra any ivelany.
Soa ihany, misy lalao Android maro izay miasa nefa tsy mila Internet. Araka izany, afaka mankafy lalao isika nefa tsy mila miahiahy momba ny misy antsika. Toa tsara, marina? Avelanay eto ambany ianao miaraka amin'ny safidin'ny lalao ivelan'ny Internet tsara indrindra.
Izany fomba afaka milalao isika isaky ny te hanana fa tsy mila miahiahy momba ny hoe manana Internet na tsia. Ity fifantenana ity dia mitady ny hiovaova arak'izay tratra, noho izany dia avelanay lalao isan-karazany ianao. Ka azo antoka fa hahita iray izay tianao ianao. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
6 Ady Geometry 3
Atombotsika amin'ny lisitra ny lisitra lalao feno traikefa nahafinaritra sy hetsika. Ny toerana misy ny lalao, any amin'ireo ala mikotrana indrindra, dia manampy betsaka ny tantara. Ny tanjontsika dia fantaro izay mitranga any amin'ireo ala ireo, satria tsy ny zavatra rehetra dia tsara tarehy toa azy. Na eo aza izany dia hihaona isika sakana isan-karazany. Lalao mahafinaritra miaraka amin'ny sary tsara.
Podemos ampidino maimaimpoana ity lalao ivelan'ny lalao ity amin'ny Android, na dia misy fividianana ao aza.
Ny tanjontsika amin'ity lalao ity dia ny mahazo lavitra araka izay azo atao nefa tsy maty. Na dia tsy maintsy mamakivaky làlana isan-karazany aza isika, dia sarotra kokoa ny tsirairay. Ka tsy maintsy manao izany isika mahaiza ary haingana be. Indrindra satria raha ela loatra isika vao mihetsika, dia hahatratra antsika ny voromahery izay manidina amin'ny lalao.
Un Ny lalao Android mampiala voly sy mahafinaritra indrindra. Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity, na dia misy fividianana ao anatiny aza ianao.
Ny anaran'ny lalao dia efa mamela antsika hanana hevitra mazava. antsika nifindra tany amin'ny ligin'ny basikety tsara indrindra eran-tany izahay. Afaka misafidy ekipa iray isika ary miomana handresy lalao maro araka izay tratra. Lalao tsara ho an'ireo tia basikety. Manana ny safidy hifaninana amin'ny namana, na eo aza izany dia mila manana WiFi na Bluetooth ianao.
La mitentina 5,49 euro ny fisintomana an'ity lalao ity. Vidiny izay mety ho toa tafahoatra. Raha tsy olana izany, dia lalao fanatanjahan-tena tsara ho an'ny Android.
NBA JAM avy amin'i EA SPORTS ™
Lalao izay tsy maintsy ataontsika manapaha kristaly betsaka araka izay azo atao. Homena marbra voafetra tsy maintsy ampiasaintsika izy ireo hahatratrarana ny tanjontsika. Lalao ho an'ny be indrindra io volyHo fanampin'izay, ny famaky fitaratra dia mampiala sasatra indrindra. Mahatsiaro ho tsara!
La maimaimpoana ity fampidinana ity ho an'ny Android. Na dia toy ny amin'ny hafa amin'ity lisitra ity aza dia mahita mividy ao anatiny izahay.
Amin'ity lalao ity isika lasa kankana izahay ary ny tanjonay dia ny handresy ny ekipa mpifaninana aminay amin'ny ady. Soa ihany, hanana lisitry ny fitaovam-piadiana sy fihetsika lehibe eo am-pelatananay izahay. Azontsika ampiasaina izy ireo handresy ny mpifaninana amintsika. Mifandimby ny fanafihana eo amin'ny ekipa. Afaka miomana tsara kokoa ianao amin'izay.
La ny fisintomana an'ity lalao ivelan'ny aterineto ity ho an'ny Android dia manana vidiny 4,99 euro. Ho fanampin'izay, mahita mividy ao anatiny izahay. Na dia tsy ilaina aza ny fividianana fandrosoana.
Ady Geometry 3
Amin'ity lalao ivelan'ny aterineto ity ho an'ny Android dia mila tsofy ireo olon-dratsy. Mihaona amin'ny fahavalo izay tsy maintsy hofohanay isika. Izany rehetra izany ao amin'ny ambaratonga mihoatra ny 100 tompon'ny lalao. Ka tsy ho leo isika. Samy hafa ny ambaratonga tsirairay ary mitombo ny fahasarotana rehefa mandeha ny fotoana. Ho fanampin'izay, manana maody ady 12 samihafa isika.
Podemos ampidino ity lalao ity amin'ny finday Android amin'ny vidiny 8,99 euro. Vidiny somary tafahoatra, fa raha tsy fanakantsakanana dia miatrika lalao mampiala voly isika.
Izany dia ny safidinay miaraka amin'ireo lalao ivelan'ny Internet tsara indrindra ho an'ny Android. Manantena izahay fa hitan'izy ireo mahaliana izy ireo ary misy iray izay sitrakao amin'ity lisitra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao ivelan'ny Internet tsara indrindra
OnePlus 5T Star Wars Edition nanambara
Ny fampiharana tsara indrindra hampiofanana ny saina